Sicir-dhimis Labaad oo loogu talagalay Metro ee magaalada Bursa | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara16 BursaKharashka labaad ee Mashruuca ee Bursa
25 / 04 / 2018 16 Bursa, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, Metro, TURKEY
'20. Duqa Magaalada Bursa Metropolitan Alinur Aktaş ayaa ka qayb galay aqoon-is-weydaarsi aqoon-is-weydaarsi ah oo lagu qabtay maalmo maaliyadeed.
Duqa magaalada Alinur Aktaş ayaa la kulmay ardayda jaamacadda Uludağ waxaana ay soo jeediyeen talooyin ku saabsan nolosha oo waxay siiyeen warka wanaagsan in ay samaynayaan sicir labaad oo loogu talagalay gaadiidka mitrooga.
'20. Maaliyadda maaliyadeed 'ee ku aaddan aqoon-isweydaarsiga; Madaxweyne Aktaş wuxuu ka qayb galay sidii afhayeen. Duqa magaalada Alinur Aktaş, oo jaamacadda aaday, isagoo metro qaada, wuxuu la sheekeystay muwaadiniinta inta lagu jiro safarka.
"Markaad akhrineysid, waxaad leedahay hadaf iyo fikrad ah dugsiga kadib"
Aktaş wuxuu la wadaagay khibradiisa noloshiisa ee dadka dhalinyarada ah ee aqoon-is-weydaarsiga ah oo ay soo qabanqaabisay bulshada maaliyadeed waxaana uu muujiyay aragtidiisa ku saabsan degmada iyo Bursa. Waxa uu sidoo kale Uludag University Kulliyadda Dhaqaalaha iyo Maamulka Sciences Kulliyadda Alinur Madaxweynaha dib loogu soo yeero in Department of Business Administration Aktas, magaalooyinka ugu quruxda badan ee Turkey, oo waxay arki mid ka mid ah jaamacadda, ayaa muujiyay baahida loo qabo in ay isticmaalaan dadka dhallinyarada ah faa'iido this. Munaasabaddan ayaa ah mid aad u qaali ah oo qaali ah, bani'aadamku wuxuu leeyahay waxyaabo badan oo ah waxyaabo ay ka mid yihiin waxyaabo ay ka mid yihiin walbahaarka iyo akhlaaqda, Duqa Aktaş ayaa ardayda ka codsaday in ay ka faa'ideystaan ​​marka ay la yimaadaan qof khibrad leh. Madaxwayne Aktaş ayaa sidoo kale sheegay in muhimadda uu leeyahay isbedellada ardayda oo ay ka qalin jebinayaan jaamacadaha. Qalinjabiyeyaal ka mid ah Kulliyadda Dhaqaalaha iyo Sayniska Maamulka ayaa fursad u leh in ay shaqo ka helaan goobo badan. Maaha arrin qeexaysa waxa. Waxa aad dareento waa muhiim. Wadankan iyo adduunka oo dhan iyada oo loo marayo wadankan waxay u baahan tahay dad caqli badan. Markaad baraneyso, waxaad leedahay hadaf, fikrad ah dugsiga kadib. Gasho jijimooyin dahab ah oo aad u badan gacantaada. Turkey waa dal gaar ah oo qurux badan. Shirkadaha waaweyn waxay hadda u baahan yihiin la-taliyayaal dhaqaale iyo la-taliyayaal dhaqaale. Samee qorshe xirfadeed halkan markan. "
Jaamacadda ugu weyn, oo muujinaysa in dugsigu bilaabay ka dib markii Madaxweyne Alinur Aktas ah, waa muhiim in la helo qalab diploma, ayuu yidhi. Isagoo cadeynaya inuu arkay faa'iido weyn oo uu ku bilaabay inuu shaqeeyo intii uu socday jaamacaddiisa, Duqa Aktaş wuxuu soo jeediyay talooyin ku wajahan dadka dhalinta yar ee jihadaas. Duqa iyo ku-xigeenku maahan xirfad, siyaasi kastaa wuxuu leeyahay xirfad uu leeyahay Aktas, "Waa inaad ku guulaysato xirfaddaada kahor siyaasadda. Waxyaabaha muhiimka ah ee siyaasadda waa in si fiican loo xasuusto marka hawshu dhammaato. Degmadu waa ganacsi halis ah oo u baahan allabaryo adag. Degmadu waxay hadda taabataa wax kasta oo nolosha ah, laga bilaabo dhalashada ilaa dhimasho
Soo-celinta Warka wanaagsan ee ardayda ku saabsan
"Waxaan sameynay sicir-dhimis ku saabsan gaadiidka shidaalka. Waxaan billaabi doonnaa sicir-dhimista labaad ee bilaha soo socda, Duqa Magaalada Mayor Aktaş, oo warka ku siiyay ardayda ku saabsan gaadiidka, ayaa ka jawaabay su'aalaha isaga weydiiyay. In ay jirto dayn ah si Bank, laakiin Aktas Bursa Madaxweynaha Gobolka xusuusiyey in magaalada ugu cafinnaa ee Turkey, Istanbul, degmo kasta ayaa laga yaabaa inuu deynta, waxa uu sheegay in joogtaynta waa muhiim. Aktaş wuxuu xusuusinayaa in degmadu ay leedahay deyn dhan ilaa 2032 iyo boqolkiiba 60 deymaha ay daboolayaan inta u dhaxaysa 2018 iyo 2020.Xaf Waxaan qabnaa dhibaatada muddada gaaban. Bixinta maaliyadeed maaha dhibaato degmo. Waxaa jira siyaabo kala duwan oo loo sameyn karo tan. Kuwani maaha daymo muhiim ah oo loogu talagalay magaalada sida Bursa. Dawladaha hoose waxay helaan qayb ka mid ah miisaaniyadda dhexe. Degmo ahaan, waxaad u baahan tahay inaad abuurto ilo kuu dhigi doona dakhliga. Sannadihii ugu danbeeyay, saamiyada ka imanaya xarunta ilaa degmooyinka ayaa la kordhiyay ".
Duqa magaalada Aktaş ayaa sheegay in xarun kale oo dhallinyaro ah oo ku yaal Görükle loo shaqeyn doono bisha Sebtembar waxaana ay ku nuuxnuuxsatay in xarun cusub la furi doono si ay uga jawaabto baahida dhalinyarada iyo in ay u fidiyaan fursad ay ku horumariyaan naftooda. Akhrisku wuxuu sheegay in Bursa aysan u baahnayn wax warshad leh, Aktaş wuxuu yiri:
"Teknosab waa mashruuc weyn. Waxay noqon doontaa aag lagu qalabeeyo warshadaha oo leh heer farsamo sare. Laga bilaabo bisha kow iyo tobnaad, aasaaska ayaa la dhigi doonaa, geeddi-socodna wuu bilaabmi doonaa. Saxiixyada xarunta automaatiga ah ee Bursa ayaa la saxiixay. Tani waa calaamad muujinaysa in warshadda gawaarida ee degaanka ay sidoo kale ku taal magaalada. Waxaan soo gudbinay rabitaankeena mawduucaan. Magaaladani waxay ku socotaa culeyska warshadaha ba'an. Waa in aan xisaabtan si wanaagsan u xisaabinno. Waxaan u baahannahay qiime sare oo lagu darey suuqa "
Dhamaadkii seminaarka, Merut Kekik, Madaxweynaha Maaliyadda Maaliyadda, ayaa soo bandhigay hambalyo muujinaya madaxweynaha Aktaş.
40 Milyan Dollar oo Tukanimo ah oo Turki ah
Anigu xataa xitaa ma heli karin baaskiilka tareenka (Video)
Metrobus Line ayaa u rogi doona Metro Istanbul
Sirkeci Halkalı xaafadaha xaafadaha ayaa la casriyeyn doonaa waxaana loo badali doonaa gawaarida
Nidaamka Bixinta EYBİS Ticket